भारतीय फ्रेन्चाइज सो सुपर डान्सर नेपालमा प्रसारण गरिँदै, सर्वाधिकार ए.डी. रिलिजलाई - बजार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २, २०७९ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — भारतीय टेलिभिजन रियालिटी सो ‘सुपर डान्सर नेपाल’लाई औपचारिक रुपमा फ्रेन्चाइज सो उत्पादन, बजारीकरण र प्रसारणको सर्वाधिकार ए.डी. रिलिजले लिएको छ । ए.डी. रिलिजले विभिन्न भूमिकामा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन, बजारीकरण र प्रशारण गर्दै आएको छ ।
सुपर डान्सर नेपालमा डान्स प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता प्रारम्भिक अडिसन मार्फत देखाउने छन् । नेपाल र नेपाल बाहिरका नेपालभाषीहरु समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्नेछन् । मञ्चबाट नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतिभा खोजी गरेकालाई यो रियालिटी सो प्रभावकारी हुनेछ । प्रारम्भिक छनोटबाट छानिएका प्रतिभालाई छुट्टै प्रशिक्षण दिइनेछ । जसका लागि १२ जाना विशेष प्रशिक्षक सुपर गुरुका रुपमा रहनेछन् भने प्रत्येक प्रतियोगीलाई एकजना कोरियोग्राफरले अभिभावकीय भूमिका निभाउादै गाइड गर्नेछन् ।
‘सुपर डान्सर नेपाल’ को प्रोडक्सन टिममा भारतकै डान्स प्लस सिजन २ का उपविजेता नेपाली डान्स समूह वाइल्ड रिपर्ज पनि अनुवन्धित छ । यो रियालिटी सो हरेक बिहीबार र शक्रबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ । फ्रेन्चाइज गाइडलाइन अनुसार ३ जना प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सुपर जज प्यानलमा रहनेछन् भने यो सो ३० भाग निर्माण हुनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ १५:२२
निर्वाचितलाई पुनः पराजित भनेपछि बर्दियाको गुलरियामा विवाद
जेष्ठ २, २०७९ कमल पन्थी
बर्दिया — गुलरिया नगरपालिका ४ का अजमेर अली नाउ एमालेबाट खुल्ला सदस्य पदमा निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घोषणा गर्‍यो । घोषणालगत्तै उनका समर्थकले खुसियाली मनाउँदै र्‍याली निकाले ।
घोषणा गरेको ४ घण्टापछि उनी पराजय भएको सूचना निर्वाचन कार्यालयले पुनः सार्वजनिक गर्‍यो । आइतबार बेलुकी निर्वाचित घोषित अजमेर ४ मतले पराजित भएको घोषणापछि एमाले समर्थक आक्रोशित भएका छन् । ‘कांग्रेसका इस्राइल नाउलाई १ हजार १ सय ४६ मतले निर्वाचित गराइयो‚’ अजमेरले गुनासो पोखे । म पराजित भएको भए मलाई किन निर्वाचित भनियो, ‘उनले भने‚ ‘यो धाँधली हो । धाँधली गरेर कांग्रेसलाई निर्वाचित गराइयो ।’ उनले आफ्नो बेइजति गराइएको भन्दै मतगणना गर्ने कर्मचारीले गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले मतगणकहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखे ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै मतगणना कार्य केहीबेर रोकेका थिए । वडा नम्बर ८ को मतपेटिका खोलिएकाले मतगणना गर्न दिने सहमति भएको छ । माओवादीका मेयरका उम्मेदवार गेहेन्द्र ढकालले जबसम्म पुनः मतगणना हुँदैन तबसम्म वडा नम्बर ९ देखि १२ वडासम्मको मतगणना गर्नु नहुने बताएका छन् । यो व्यवस्थापनका कमीकमजोरी भएको उनले जनाए ।
मतगणनास्थलमा गुलरिया नगरपालिकाका कर्मचारी फेरिनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ १५:१८